Iinkqubo zoshicilelo: yintoni na kunye nezona mpawu ziqhelekileyo | Abadali be-Intanethi
Ihlabathi loshicilelo liya likhula ngokufunwa licandelo loyilo lwegraphic okanye ishishini. Kakhulu, oloyilo kunye noshicilelo bezisoloko zihamba kunye. Ngokukodwa, ukuba usebenza kwicandelo lentengiso yoyilo lwegraphic, uya kukwazi okokuqala kwaye uya kuyazi into esithetha ngayo.
Xa siyila, ukuthandabuza kuhlala kuvela malunga yeyiphi inkqubo yoshicilelo eyona ilungileyo kwiiprojekthi zethu, ukuba siya kumangaliswa xa sibona imibala xa siyiprinta, okanye ukuba endaweni yoko, iprofayili yombala ichanekile kwaye iboniswa njengoko sihlolisise kwisikrini.
Ewe, Kule post size ukucacisa ukuba yintoni na yonke le nkqubo yoshicilelo kwaye ihlelwa njani okanye iboniswe kushishino loyilo. Qaphela kuba siza kucacisa iinkcukacha ezithile ezinokuba nomdla ukwazi ngomsebenzi owenzayo kwixesha elizayo.
1 iinkqubo zoshicilelo
1.1 Ukuprintwa kwe-offset
1.1.1 Iingenelo zokusebenzisa le nkqubo:
1.1.2 Izinto ezingalunganga zale nkqubo:
1.2 ushicilelo lwedijithali
1.2.1 Izibonelelo zale nkqubo:
1.2.2 Izinto ezingalunganga zale nkqubo:
1.3.1 Izibonelelo zale nkqubo yoshicilelo:
1.3.2 Izinto ezingalunganga zale nkqubo yoshicilelo:
2 Iindidi zePrinta
Umthombo: Inkonzo yemoto
Iinkqubo zoshicilelo zichaziwe njengenye yeendlela ezininzi ezikhoyo zokuphindaphinda umfanekiso kwindawo ethile ebonakalayo. Le nkxaso isoloko inqunywe zombini ngephepha kunye ne-canvas. Ngokuqinisekileyo ukuba uyayazi imbali yoshicilelo lokushicilela, uya kuqonda ukuba siye savela ngokwaneleyo ukuze sazi ukuba sinokuwuprinta ngokukhawuleza kangakanani umfanekiso.
Ngoku, ukuba sithetha ngeenkqubo zoshicilelo, zisikhokelela ngokukhawuleza kwiinkqubo ezintathu eziphambili ezikhoyo nezisisiseko semihla ngemihla. Ezi nkqubo zoshicilelo zihlelwa zibe: ushicilelo lwe-offset, ushicilelo lwedijithali kwaye lukwaziwa njengoshicilelo lwekhusi.
Ukufumana okokuqala ukuba zeziphi iinkqubo ezifanelekileyo kakhulu, kufuneka siyazi ukuba yintoni na kwaye yeyiphi imisebenzi eyenziwa yinkqubo nganye. Yiyo loo nto siqulunqe ulwazi oluyimfuneko ukuze sikucacisele ngalo.
Umthombo: Ventura Press
Inkqubo yeoffset yeyona nkqubo indala nesetyenziswa kakhulu ekushicileleni ephepheni. Ihlelwa njengodidi lwenkqubo yoshicilelo olungathanga ngqo, oko kukuthi, ngexesha lenkqubo yokushicilela, umfanekiso okanye into eprintwayo ayifuni ukuya ngqo kwi-plate, kodwa kunoko idinga irabha kunye nenkxaso yokugqibela.
Ukusetyenziswa kwerabha kwenza ukuba i-inki nganye ibe neziqhamo kwaye Xa uzisebenzisa kulo mbandela, azenzi i-corrosion okanye zisebenzise i-inki nganye kakhulu.
Iingenelo zokusebenzisa le nkqubo:
Xa sishicilela umfanekiso okanye siwenza kwakhona, umfanekiso ochanekileyo nogqibeleleyo uyadalwa, enika inqaku lokuzithemba ekuphuhliseni umbono.
Ngokungafaniyo nezinye iinkqubo, inkqubo ye-offset yenzelwe ukuqulatha umgangatho ongaphezulu kakhulu kwimibhalo yayo.
Enye inzuzo yale nkqubo ukuba ithathelwe ingqalelo kukuba sinokusebenzisa zonke iintlobo zephepha kunye nezixhobo, nto leyo yenza kube lula ukuyisebenzisa kuba sinokukhetha phakathi kweenketho ezahlukeneyo.
Ikwayenye yeenkqubo ezingabizi kakhulu, ngokungafaniyo nezinye, ixabiso layo lokuvelisa liphantsi kakhulu.
Kwimiba yobugcisa, ushicilelo lweoffset, igcina ulawulo olulungileyo lweprofayile yombala esetyenziswa ngawo onke amaxesha kwaye ayihambelani kuphela nezinye izinto, kodwa nezinye iinki.
Izinto ezingalunganga zale nkqubo:
Asiyonkqubo apho ungasebenzisa ubutyebi bakho kwaye eyenzelwe umntu, ekubeni inkqubo yayo yoshicilelo iqala ukusuka kwisiseko sokuba yenziwe ngamacwecwe amane ahluke ngokupheleleyo omnye komnye kwaye agcine inkqubo yomgca.
Ngaphambili siye sabonisa ukuba yenye yezona nkqubo zezoqoqosho, kodwa kule nto, imveliso eninzi iyimfuneko. Oko kukuthi, ukuba sikhetha ukukhetha le nkqubo, kufuneka sikhumbule ukuba ukuze ibe noqoqosho, kufuneka sishicilele kakhulu.
ushicilelo lwedijithali, luhlobo loshicilelo olukuvumela ukuba uprinte ngokuthe ngqo ephepheni. Ngexesha lale nkqubo, akukho miba yangaphandle ebandakanyekayo njengoko kunjalo ngoshicilelo lwe-offset, kunoko inkqubo ithe ngqo ngokupheleleyo. Ngoko ngokungafaniyo nezinye iinkqubo, ikunika inkqubo yoshicilelo ngqo.
Yenye yeenkqubo zoshicilelo ezithi, kunye nenkqubo ye-offset, ngoku zezona zisetyenziswa kakhulu. Le nkqubo yaba yinto ebaluleke kakhulu kwicandelo lomzobo kuba ushicilelo lwayo lunikeza umgangatho omkhulu kunye nokuchaneka.
Izibonelelo zale nkqubo:
Yenye yezona nkqubo zoshicilelo zingabizi kakhulu nezinoqoqosho. Ngokungafaniyo nezinye iinkqubo, kufuneka isetyenziswe ukuba umthamo woshicilelo uphantsi kakhulu. Okuchaseneyo kwenzeka ngenkqubo ye-offset, efuna umthamo omhle wokushicilela ukuze ixabiso libe noqoqosho kangangoko kunokwenzeka.
ngokungafaniyo nabanye, yenye yezona nkqubo zikhawulezayo ukuzisebenzisa, njengoko ayifuni amacwecwe, umfanekiso uphinda uveliswe ngokuthe ngqo kwinkxaso kwaye uprintwe xa ukhetho lusebenza.
Ngokungasebenzisi intsimbi, ewe sinokwenza indlela yoshicilelo ngokusesikweni. Yintoni esinokuyenza ngokuthanda kwethu uluhlu lweendlela kunye nokhetho.
Ngamafutshane, Yinkqubo yokushicilela esisoloko siyisebenzisa ngamaxesha onke.
Le nkqubo ayamkeli i-inki; kuba sinokuprinta kuphela ngeprofayile yombala we-CMYK. Iprofayili yombala we-CMYK yiprofayili yombala eprintayo, ethi, ngokungafaniyo nenye iprofayili, i-RGB, isetyenziselwa ukubonwa kwangaphambili kwesikrini.
Umgangatho wayo uphantsi kunomgangatho womfanekiso wenkqubo ye-offset
Kungenzeka ukuba ngexesha lokushicilela, kukho ukuphambuka kwee-inki ephepheni ukuba ayiphathwa kakuhle kwaye ukhetho oluchanekileyo alukhethwa. Yinkqubo ebandakanya ubuchule obungakumbi bobugcisa.
Umthombo: The Creative Greenhouse
Ushicilelo lwekhusi yenye inkqubo yoshicilelo enjongo yayo iphambili, kukudlulisa uhlobo lwe-inki kumnatha oxineneyo. Ikwagqalwa njengenkqubo yoshicilelo oluthe ngqo, ekubeni yenziwe kuphela ziindlela esizikhankanyileyo.
Izibonelelo zale nkqubo yoshicilelo:
Isebenza ngee-shades ezimnandi kakhulu kwaye ezibethayo kunye neeprofayili zemibala. Evelisa iziphumo ezilunge kakhulu.
Yindlela yoshicilelo elula ukuyenza kwaye iyila kakhulu. Ukongeza, usebenza ngemibala ngesandla sokuqala. Ngaphandle kokuhamba koomatshini abazenza ngokuzenzekelayo.
Ukuba yindlela eyenzelwe umntu ngakumbi, sinokusebenzisa zonke iintlobo zenkxaso, amalaphu, amaplanga, iphepha, ikhadibhodi, njl.
Izixhobo ziphinda zisebenziseke, ukusukela singaphinda sizisebenzise nanini na xa sifuna.
Izinto ezingalunganga zale nkqubo yoshicilelo:
Ayiqhelekanga ukuba neemveliso ezininzi kule mihla, nangona iyindlela elula yokwenza.
Ngenxa yokungabikho kwezixhobo ezenza amaxabiso echromatic ukuya kwimilimitha, kunokubakho utshintsho lombala kwiziphumo zokugqibela.
Ayomi ngokulula kuba ifuna iiyure kunye nexesha.
Olu didi lwabashicileli luphawulwa ngomgangatho ophezulu abawugcinayo kwiziphumo zabo. Ngokuqhelekileyo zibonakala ngendlela ezisebenza ngayo, kuba ziyafana naleyo yomatshini wokufotokopa. Ngohlobo lwelaser, umfanekiso ulayishwa kwaye uboniswe ngokuthe ngqo ephepheni. Ngomnye wabashicileli abasetyenziswa kakhulu ukuza kuthi ga ngoku.
Abashicileli be-Monochrome, njengoko igama libonisa, zenzelwe kuphela ukuprinta umbala omnye, odla ngokuba mnyama. Bangabashicileli abasebenza ngesantya esiphezulu, nto leyo ethetha inkcitho encinci yexesha. Ngokuprinta umbala omnye, ikwathathwa njengomnye wabashicileli abancinci, kuba ixabiso layo alinyuki kakhulu.
Ngamafutshane, ngumshicileli ogqibeleleyo wokuqhuba iiprojekthi zakho ze-monochrome kwaye uzingenise kwihlabathi leeyinki ezizodwa. Ukongeza, ngenxa yeendleko zayo eziphantsi, amawaka kunye namawaka okuveliswa kobuninzi kunokwenziwa.
Abashicileli be-Inkjet ngabo bashicileli apho kuqheleke kakhulu ukubabona emakhayeni ethu okanye kuyo nayiphi na iofisi esiya kuyo. Ukuze uyiqonde ngcono, ngabashicileli bakudala esikhe sinabo sonke kwishelufa okanye idesika. Basebenza kunye noluhlu lwee-injection ezichitha i-inki kwaye ukusuka koku benza umfanekiso okanye isicatshulwa.
Yintoni mhlawumbi engaqinisekanga ngokupheleleyo malunga naba bashicileli kukuba kumaxesha ngamaxesha, kufuneka uthenge uluhlu lwemilomo emitsha yombala ukuze uprinte. Kodwa umgangatho wamkelekile kwaye ulunge kakhulu.
Icandelo lokushicilela likhulu kangangokuba bekuya kuthabatha iinyanga kunye neminyaka yoqeqesho ukuze uliqonde ngokupheleleyo. Zininzi iinkqubo ezithi, ngenxa yenkqubela phambili yeteknoloji kunye nokukhula kwayo, iinkqubo ezintsha ziye zaphuhliswa kwaye ezintsha zivavanywa yonke imihla.
Njengeendlela, kwenzeka into efanayo ngabashicileli, kukho ezininzi ezikhoyo kwaye asizange songeze kuluhlu, kuba nganye kuzo iyilelwe ukuhlangabezana noluhlu lweenjongo ezibenza zibe zizodwa kwaye zisebenze, kwaye Bahlangabezana neemfuno ezahlukeneyo ngokupheleleyo. .
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » iinkqubo zoshicilelo